PVC & WPC darfahoodii derbiga
PVC Sheet marmar ah
WPC qoryo Eco-
WPC guddi derbiga
tube alwaax WPC
Melamine Board soo foodsaarayso
Inta badan wax soo saarka daboolayaa noocyada kala duwan ee qalabka decoration, qalabka dhismaha, dhammaan noocyada kala duwan ee plywood, melamine wajahay plywood iyo wixii la mid ah
Si faahfaahsan kasta waxaa lagu hagaajiyey!
Farsamo kasta waa qumman yahay!
Dhaxlidda raacdada ah ee heer sare ah ee nafta shirkadu, ha uu adduunka ahaan kala duwan sababta oo ah Wood Dalu ah.
In ka badan 15 sano, Shandong Golden Continent Qurxinta Qalabka Co., Ltd waa soo saaraha xirfad iyo ganacsade, ku takhasusay cilmi, horumarka iyo wax soo saarka. Ka dib markii sano ee horumarinta, waxaan ku adkayn xidhiidhka iskaashiga deggan mudada dheer macaamiisha badan oo qalaad. Waxaan ku yaalaan Shandong inay helaan gaadiid ku haboon.
waxyaabaha ugu weyn ee dabooli noocyada kala duwan ee darfahoodii PVC iyo darfihiisuba WPC, oo ay ku jiraan: sheet PVC marmar ah, guddi derbiga PVC, guddi WPC iyo guddiga xumbo PVC, iwm Shirkadda Our waxaa ka go'an in la tayada ka sarreeya siin darfahoodii derbiga madaxtooyada. qanacsanaanta Consumer waa dhiirogelin our ugu weyn ee aannu horumar joogto ah!
Waxaan mar walba hogaansamey falsafada ganacsi oo ka mid ah "ka dhigi dunida jeclaado waxyaabaha Chinese" oo ku hayaa sameynta xiriir ganacsi guul leh macaamiisha cusub oo dunida ku ah horumarka caadiga ah ee mustaqbalka dhow.
dunida Samee jecel waxyaabaha Chinese
Gudaha PVC WPC Great Wall Panel
1.Specifications Colo Available ...
profiles madaxtooyada Tall Great Wall wpc guddi b ...
Gadaaman Wall Panel
caag Waxyaabaha iyo qori Technolog ...
Eco-Wood WPC Saqafkii
Waxyaabaha Wood, PVC, lagu daro Technol ...
qoryo Waxyaabaha oo kooban oo caag ah ...
PVC Film wajahay PVC xumbo guddiga / sheet derbiga d ...
1.Specifications: PCV xumbo Board In ...
Solid Sheet PVC Forex 1.22 2.44m * celuka cad p ...
1. sooc: Guddiga xumbo PCV ...
PVC darfaha decoration marmar sheet derbiga
1. Qaab dhismeedka iyo caddaymaha: Nam ...
In ka badan 15 sano, Shandong Golden Continent Int'l Trade Co., Ltd waa soo saaraha xirfad iyo ganacsade, ku takhasusay cilmi, horumarka iyo wax soo saarka. Ka dib markii sano ee horumarinta, waxaan ku adkayn xiriirka deggan mudada dheer la kaashanaya macaamiisha badan oo qalaad ...
Shandong Golden Continent Int'l Trade Co., Ltd. @ 2019 Xuquuqda daabacaaddu
magaalada Linyi, Gobolka Shandong, Shiinaha
PCV Wall Panel, Plywood Exporter, Price Best plywood Commercial, PCV Sheet qorxiyey, Composite Plywood, Film soo foodsaarayso Shuttering plywood,